सागसब्जीलाई कसरी विषरहित बनाउने ? – Yug Aahwan Daily
सागसब्जीलाई कसरी विषरहित बनाउने ?
युग संवाददाता । ११ माघ २०७६, शनिबार १०:४६ मा प्रकाशित
470 पटक हेरिएको
स्वास्थ्यका लागि मौसमी सागसब्जी खानुपर्छ भनिन्छ । तर, बजारमा उपलब्ध सागसब्जीको गुणस्तर एवं शुद्धतामाथि उपभोक्ता ढुक्क छैनन् ।
किनभने बजारबाट हाम्रो भान्सासम्म आइपुग्ने सागसब्जी पूर्णत जैविक उत्पादनन् होइनन् । सागसब्जी रोप्ने, उमार्ने, भण्डारण गर्ने क्रममा रासयनिक मल, किरा मार्न किटनासक औषधि प्रयोग गरिन्छ ।
यसरी विषाक्त बनेर भित्रिने सागसब्जीबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने ?
यसको सार्वोत्तम विकल्प भनेको जैविक विधीबाट उत्पादन गरिने सागसब्जी, फलफूल खरिद गर्नु हो । तर, अहिल जैविक विधीबाट उत्पादित फलफूल, सागसब्जी, अन्न हामीले सहजै प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।
यस्तो अवस्थामा हामीले केही खानेकुरालाई भान्सामा नै शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ । भलै यो विधीबाट पूर्णत जैविक खानेकुरा प्राप्त गर्न नसकिए पनि विषाक्त तत्व हटाउन सकिन्छ । बजारबाट खरिद गरेर ल्याएपछि फलफूल तथा सागसब्जीलाई एउटै भाडोमा राखेर पर्याप्त मात्रामा पानी हाल्नु पर्छ । अब यसमा भिनेगर हालेर करिब १५ मिनेट छोड्नु पर्छ ।
त्यसपछि, उक्त भाडोबाट फलफूल तथा सागसब्जी हटाएर राम्ररी धुनु पर्छ । यो विधि अपनाएमा फलफूल तथा सागसब्जीबाट ९८ प्रतिशत सम्म किटनाशक औषधिलाई हटाउन सकिन्छ । त्यसैले, फलफूल तथा सागसब्जीमा प्रयोग गरिएको किटानशक औषधी हटाउने यो सरल उपाय मानिन्छ ।
हामी सोच्छौं, राम्ररी खाएमा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक तत्व प्राप्त हुन्छ ।
त्यसैले फलफूल तथा सागसब्जीको सेवन गर्छौ । जबकी यस्ता खानेकुरामा अत्याधिक मात्रामा किटनासक विषादीको प्रयोग गरिएको हुन्छ ।
यस्ता किटनाशक विषादी विशेषगरी बाटबिरुवामा लागेको किरा मार्न प्रयोग हुने गर्दछ । यस्ता किटानशक औषधी साधारण पानीले धोएर जाँदैन ।
त्यसैले, अत्याधिक मात्रामा किटानशक औषधी प्रयोग गरिएको फलको सेवनले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ । अहिले मिर्गौलाको समस्यादेखि क्यान्सरसम्म जटिलता यस्तै खानपानले निम्त्याएको हो ।
किटानशक विषादीका सेवनले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
विभिन्न अध्ययनले जनाए अनुसार आहारमा किटनाशकको अत्याधिक प्रयोगले क्यान्सर, मिर्गौला तथा फोक्सो सम्बन्धि समस्या निम्तने गर्छ । बच्चामा विभिन्न किसिमका संक्रमण निम्त्याउने गर्छ ।
यसको सम्पर्कमा रहनाले बाल्यकालमै क्यान्सर, अटिज्म, एकाग्रता नहुने, सक्रियताको कमी जस्ता समस्या हुने गर्छ । गर्भवतीले किटनाशक युक्त फलफूल खाएमा यसले भ्रुणलाई समेत प्रभावित पार्छ । जसका कारण जन्मसम्बन्धि जटिलता हुन सक्छ ।
त्यसबाहेक, यसको सेवनले वाकवाकी लाग्ने,पखाला लाग्ने, पेट बौडिने, चक्कर आउने, तनाव, फूड प्वाइजनिङ्ग हुनसक्छ ।
किटनाशक एक किसिमको रसायन पदार्थ हो ।
यसको प्रयोग बोट विरुवामा लागेको किरा मार्न गरिन्छ ।खेती किसानीमा अहिले किटनासको प्रयोग अनिवार्य जस्तै हुँदै आएको छ ।
आलु, गोलभेडा, सागसब्जी, खुर्सानी सबै अन्नबालीमा किटनासक प्रयोग गरिदै आएको छ ।